आज कुन तरकारीको तथा फलफूल मूल्य कति ? « Sutra News
आज कुन तरकारीको तथा फलफूल मूल्य कति ?
९ असार २०७९, बिहीबार ११:०२
काठमाडौं – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आजका लागि तरकारीको भाउ निर्धारण गरेको छ । आज ठूलो भारतीय गोलभेँडाको मूल्य ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । तर, लोकल सानो गोलभेँडाको मूल्य २४ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७९, बिहीबार ११:०२